OnePlus Nord N10 5G Review : လူတိုင်းအတွက်သင့်တော်တဲ့ 5G Mid-range ဖုန်း?? — Anycall Mobile
By liam December 31, 20203Mins Read
OnePlus အနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ July လောက်တုန်းက သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး 5G Mid-range ဖုန်းလို့ပြောရမယ့် OnePlus Nord ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ ဒီ OnePlus Nord ထွက်ပြီးနောက် ၃ လအကြာမှာတော့ OnePlus N10 နဲ့ N100 5G တို့ကိုထပ်မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ ဒီမှာ N ဆိုတာက Nord Series ကိုရည်းညွှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ‌ဖုန်းတွေဟာ OnePlus Nord လိုမျိုးသက်သာ‌တဲ့ဈေးနဲ့ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အစောဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ OnePlus Nord ကတော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့ခြင်းမရှိပေမယ့် OnePlus Nord N10 5G ကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
Nord N10 5G ရဲ့ Back Design ကတော့လက်ရှိဈေကွက်ထဲမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Mid-range ဖုန်းတွေလိုပဲ Glossy Finish Back Design ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်။ ဒီ ကျောဘက် Design မှာ OnePlus 8T လို စတုရန်းပုံစံ Camera Setup ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီး Fingerprint Scanner နဲ့ OnePlus Logo တစ်ခုထည့်ပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ သူ့ကိုစကိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာ Cheap ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကိုမရသလို High-End ဖုန်းတစ်လုံးကိုင်နေရသလို Feeling လည်းမရပါဘူး။ ကိုင်လိုက်တာနဲ့ Mid-range ဖုန်းမှန်းတန်းသိသာစေတဲ့ Feeling ပါပဲ။
ဖုန်းရဲ့ ရှေ့လက်မှာတော့ Punch-hole တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ပေးထားတယ်။ ဒီမှာဖုန်းရဲ့ Bezels တွေကတော်တော်လေးထူးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အောက်ခြေက Bezels တွေဆိုပိုတောင်ထူနေပါသေးတယ်။ ဖုန်းရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာတော့ Sim Tray Port နဲ့အတူ Volume ခလုတ်ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ညာဘက်ဘေးမှာတော့ Power ခလုတ်ကိုပဲတင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီမှာ အရင် OnePlus ဖုန်းတွေလို Alert Slider တော့မပါတော့ပါဘူး။ Alert Slider မပါတဲ့အတွက် အရင် OnePlus ဖုန်းတွေလိုSilent, Vibration ၊ Ring တွေကိုအလွယ်တကူအပိတ်အဖွင့်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ အောက်ခြေမှာတော့ OnePlus ဖုန်းတွေမှာတွေ့ရခဲတဲ့ 3.5mm နားကြပ်ပေါက်ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
ဒီနားကြပ်ပေါက်ဘေးမှာတော့ Type C Port နဲ့ Speaker ပေါက်တို့ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Speaker ဆိုမှ သူ့မှာ Stereo Speakers ကိုသုံးပေးထားပါသေးတယ်။ အသံထွက်အနေနဲ့ကတော့ သူ့ရဲ့အသံကအရမ်းဆူထွက်နေတာမျိုးမရှိဘဲ Surround Sound Experience ကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Audio Quality ကိုတော့ကျွန်တော် တော်တော်လေးသဘောကျမိပါတယ်။
OnePlus Nord N10 5G ရဲ့ Display မှာတော့ OnePlus Nord မှာသုံးခဲ့တဲ့ OLED Display ကိုမသုံးပေးထားပဲ ရိုးရိုး 6.5-inch Full HD+ LCD Display ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်။ ဒီ Display ဟာဆိုရင် Videos တွေကြည့်တာတွေ ၊ ဂိမ်းတွေဆော့တဲ့အခါတွေမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်။ Display ပေါ်မှာပါတဲ့ Punch-hole ကလည်းအရမ်းမကြီးတဲ့အတွက် Full Experience ကိုလည်းကောင်းကောင်းခံစားလို့ရပါတယ်။ နောက်ထပ် Display မှာ 90Hz refresh rate ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အတွက် တော်တော်လေး Smooth ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Oxygen OS 10.5 ကြောင့်လားမသိဘူး.. App တွေထဲမှာ Scroll လုပ်တဲ့အခါ အိအိဖက်ဖက်လေးနဲ့ တော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Display Quality ကတော့ OLED Display တွေလောက် အရောင်တွေ မစို ၊ မတောက်ပေးမယ့် အရောင်တွေက Balanced ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ LCD တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း Dark Mode ပြောင်းလိုက်ရင်တော့ Display ကခပ်ဖြူဖြူဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
သူ့ရဲ့ Brightness ကတော့ Indoor မှာအဆင်ပြေပေမယ့် Outdoor တွေမှာတော့ တော်တော်လေးကြည့်ယူရပါတယ်။ ဒါကတော့ Mid-range ဖုန်းတွေရဲ့ ပြဿနာလို့ပြောလို့ရတဲ့အတွက်လက်ခံပေးလို့တော့ရပါတယ်။
Performance အတွက်တော့ သူ့မှာ Snapdragon 600 Series ထဲက အသစ်ထွက်ထားတဲ့ Snapdragon 690 5G Chipset ကိုသုံးပေးထားတယ်။ Chipset အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖုန်းရောက်ရောက်ချင်းပဲ ကျွန်တော် AnTuTu Benchmark ကို Run ကြည့်လိုက်တယ်။ ထွက်လာတဲ့အမှတ်ကတော့ Total ကို ၂ သိန်း ၈သောင်းကျော်ထိရတာကိုတွေ့ရတယ်။ Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် ဒီအမှတ်ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အမှတ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ တကယ့်အပြင်မှာစမ်းကြည့်တဲ့ Experience ကိုပြောရရင်တော့Gaming ပိုင်းမှာ Graphic ကောင်းကောင်းနဲ့တော်တော်လေးဆော့လို့အဆင်ပြေတယ်။ PUBG ကို အမြင့်ဆုံး HD ၊ Frame Rate High မှာဆော့ကြည့်တဲ့အခါ Lag တာတွေမတွေ့ရဘဲချောချာမွေ့မွေ့နဲ့ဆော့လို့ရပါတယ်။ Apps တွေထဲဝင်တဲ့အခါတွေမှာတော့ Loading Time ကမသိမသာလေးကြာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Performance ကိုခြုံပြောရင် Mid-range ဖုန်းတွေထဲမှာ Performance ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ Performance ရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူး။ Software ပိုင်းမှာတော့ Android 10 အပေါအခြေခံထားတဲ့ Oxygen OS 10.5 နဲ့ Run ပေးထားတယ်။ ဒီ Oxygen OS ဟာဆိုရင် Features အစုံနဲ့ Stock Android Experience ပေးနိုင်တဲ့ OS လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
OnePlus Nord N10 5G မှာ Mid-range ထဲကကဖုန်းတွေလို Quad Camera Setup ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ ဒီ ထဲမှာ Main 64MP Sensor ၊ 8MP Ultrawide Lens ၊ 2MP Macro Lens နဲ့ 2MP Monochrome Lens တွေပါတယ်။ Camera Quality ကတော့ သူ့ရဲ့ 64MP Main Camera ကနေရိုက်‌ပေးတဲ့ 16-megapixel ပုံတွေက အရောင်တွေ Balanced ဖြစ်ပြီး Details ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဒါကတော့ Outdoor အခြေအနေတွေမှာပါ။
အလင်းရောင်လေးနည်းနည်း‌ကျတာသွားတာနဲ့ Main Camera နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတွေတော်တော်လေးဆိုးသွားပါတယ်။ ပ‌ံုတွေက ခပ်ဝါးဝါးဖြစ်နေပြီး Nosie တွေ ကော ၊ Lens Flare တွေကော၀င်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဒီပြဿနာကိုတော့ Camera App ထဲမှာပါတဲ့ Nightscapse Mode နဲ့ပြန်ဖြေရှင်းလို့ရပ်တယ်။ Nightscapse နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ Night Photos တွေမှာတော့ Noise တွေသိသိသာသာလျော့သသွားတယ်။ Details တွေလည်းပိုကောင်းသွားပါတယ်။ ဒီအတိုင်း Night Photos တွေကိုရိုက်ရင်အဆင်မပြေပေမယ့် Nightscapse Mode နဲ့ဆိုရင်တော့တော‌်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
8MP Ultra-wide Lens ကလည်း Main Camera လိုပဲအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲံအခြေအနေတွေမှာ ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ ပုံတွေရဲ့ ဘေးထောင့်လေးတွေမှာ Distortion လေးတွေကိုတွေံ့ရတယ်။ Details တွေကလည်းလျော့သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Low Light မှာပုံတွေကကြည့်ရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါဘူး။
16 MP Front Facing Camera ကတော့ Effect တွေဘာတွေပိနေတာမျိုးမရှိဘဲ Sharp ဖြစ်တဲ့ပုံတွေကိုရုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာ Beautification Mode ကိုဖွင့်ရိုက်လို့ရတဲ့အတွက် ဒီ Beautification ကတော့ မိန်းက လေး Users တွေအတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေမှာပါ။
သူ့မှာပါတဲ့ 4,300 mAh Battery ကတော့ ကျွန်တော်တော်စမ်းကြည့်ရသလောက်ဆိုရင် ပုံမှန်ဂိမ်းတွေဆော့တာတွေ ၊ Web-Browsing လုပ်တာတွေ ၊ Videos တွေကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ရက်လောက်ထိခံတာကိုတွေ့ရတာ။ သုံးရတဲ့အချိန်မှာလည်း ဆောင်းရာသီမို့လို့လားမသိ ပူတာမျိုးတွေလည်းမရှိပါဘူး။ Charging မှာတော့ 30W WrapCharge ဟာ 4,300 mAh Battery ကို ၁၀၀% အပြည့်သွင်းတဲ့အခါ တစ်နာရီလောက်ထိအချိန်ပေးရပါတယ်။ 55% ထိကိုတော့ နာရီဝက်လောက်ပဲကြာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးအချုပ်အနေနဲ့ OnePlus Nord N10 5G ကဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲ??
Mid-range ဖုန်းတွေထဲမှာ 5G လည်းပါရမယ် ၊ 90Hz Display လည်းရရမယ် ၊ Daylight မှာ ကင်မရာလည်းကောင်းကောင်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ OnePlus Nord N10 5G ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေမယ့်ဖုန်းတစ်လုံးပါပဲ။
တကယ်လို့စာဖတ်သူက Camera လည်းအကောင်းကြီးကိုလိုချင်တယ် ၊ Performance မှာလည်းကြမ်းရမယ် ၊ Battery များများလည်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ OnePlus Nord N10 5G ကအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရင်း Review လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်…
OnePlus NordOnePlus Nord N10 5G
မကြာခင်ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်လာတော့မယ့် OnePlus Nord N10 5G အကြောင်း